WOOOOW: 4-gool iyo hal Caawin, Maxamed Saalax oo noqday laacibkii ugu Horreeyay TAARIIKHDA oo… – Gool FM
Byare March 17, 2018
(England) 17 Maarso 2018. Maxamed Saalax ayaa caawa dhigay wacdaro aan innaba caadi ahayn kaddib markii uu dhaliyay afar gool isla markaana uu caawiyay goolka kale ciyaartii ay 5-0 uga adkaadeen Watford.
Haddaba halka ka aqriso Rikoodhada uu dhigay Wiilka Muslimka ah:
Maxamed Saalax ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay Taariikhda ee xilli ciyaareedkisii ugu horreeyay Liverpool u dhaliya 36-gool wuxuuna jabiyay Rikoodhka u yiilay Fernando Torres oo kal ciyaareedkiisii ugu horreeyay dhaliyay 33-gool.
Wuxuu kaloo noqday laacibkii ugu horreeyay ebid ee u dhashay dalka Masar oo saddexleey ka dhaliya Premier League.
Maxamed wuxuu kaloo noqday laacibkii ugu horreeyay oo Afar Leey u dhaliya Liverpool tan iyo Luis Suarez oo Afar gool ka dhaliyay Norwich Bishii December 2013.
Maxamed Saalax ayaa dhaliyay kal ciyaareedkan Premier League 28-gool kaliya hal laacib oo Afrikaan ah ayaa dheer hal gool waana Didier Drogba oo Chelsea u dhaliyay 29 gool xilli ciyaareedkii 2009-10.
Wiilka reer Masar ayaa sidoo kale noqday laacibkii ugu horreeyay oo Afar gool uu goosha la beegsado afar gool u badelo tan iyo Andrey Arshavin oo Arsenal u dhaliyay kulan ay ka horyimaadeen Liverpool Bishii Abriil 2009.
Kadib 4-tii gool ee Caawa uu dhaliyay Salah, Mid kamid ah taageerayaasha Liverpool oo islaamay